Tsotra fa ny tanjon’ny SMM amin’izao fotoana itantanany azy izao dia hanery ny fanjakana hampihatra lalàna hoy Clément Jaona Filoha vaovao ny SMM – La gazette DGI du 22 février 2019 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Clément JaonaTsotra fa ny tanjon’ny SMM amin’izao fotoana itantanany azy...
Clément JaonaCorruption MadagascarSyndicat des Magistrats de Madagascar
Herinandro izao no nahavoafidy an’ingahy Clément Jaona izay filohan’ny SMM na ny sendikan’ny mpitsara Malagasy. Izy no voafidin’ny mpitsara eto Madagasikara hisolo an’i Herinaivo Fanirisoa. Ingahy Clément Jaona izay filoha lefitra ny sendika teo aloha ihany.
Hitondra ny sendika ao anatin’ny telo taona ingahy Clément Jaona. Raha tafaresaka taminay izy ity herinandro ity dia nanambara tsotra fa ny tanjon’ny SMM amin’izao fotoana itantanany azy izao dia hanery ny fanjakana hampihatra lalàna.
Eo anatrehan’izany fanambarana izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe “tsy mihatra ve ny lalàna eto Madagasikara?”. Maro no zavatra tsapan’ity “magistrat” amin’izany resaka nataony izany. Inona no lalàna tsy mihatra eto ary amin’ny fomba ahoana no mety ho fisehon’izany Isan’ny toeram-piasana voalazan’ny fikambanana iraisam-pirenena fa anjakan’ny kolikoly sy sehatra ny fitsarana eto Madagasikara. Manampy azy amin’izany ireo mpitandro ny filaminana izay misy ny zandary sy ny pôlisy.
Ny fikambanana iraisam-pirenena hatrany no milaza fa natao ho an’ny mahantra ihany ny fonja Malagasy. Tsy miditra am-ponja eto Madagasikara ny mpanan-karena sy ny be galona isan-karazany. Na miditra aza dia tsy mitovy amin’ny rehetra. Ny mahakasika ireo ve no tian’ingahy Clément Jaona tenenina fa hanery ny fanjakana hampihatra lalàna ny SMM.
Ho an’ny olona tsotra dia ny fitsarana no heverin’izy ireo fa fanjakana. Ka inona no tian’ingahy Clément Jaona lazaina hoe fanjakana ity indray?
Raha ny fanjakana indray no asian-dresaka dia ny mpitondra ny firenena no azo lazaina amin’izany. Ny filohan’ny repoblika, ny minisitra ary ny depiote sy ny senatera no mpitondra fanjakana eto Madagasikara. Noho izany dia azo adika fa ireo olona ireo no isan’ny ho terena hampihatra ny lalàna.
Midika koa izany fa mbola misy olona henoin’ny mpitsara indray ao amboniny ao amin’ny fanapahan-kevitra izay raisiny amin’ny fitsarana ireny. Ny filohan’ny repoblika no filoham-boninanhitra ny fitsarana. Misy ny antanan-tohatra tsy maintsy arahina amin’ny fitsarana ireny ka misy andraikitra ny mpitondra fanjakana izany ve ny raharaham-pitsarana ? Matetika tokoa dia tsy maty manota izay mitondra sy izay voafidim-bahoaka. Iza no tsy mahalala fa voasazin’ny lalàna higadra mandrapahafatiny ingahy Ravalomanan Marc, nefa tsy nisy ny fampiharana izany didy izany. Amin’izao fotoana izao dia miandry izay hanadihadiana an’ingahy Solonandrasana Olivier sy ny olona rehetra niray tsikombakomba taminy tamin’ny resaka vola manokana ho an’ny kaominina ny vahaoka tamin’ireo vola izay voalaza fa voahodinkodina.
Misy koa ny tsy fampiharana ny didy izay avoakan’ny fitsarana rehefa tonga any amin’ny ministera sy ny olona voakasika izany. Ireny rehetra ireny ve no tian’ingahy Clément Jaona ho tenenina amin’ny filazany hoe “ hanery ny fanjakana hampihatra lalàna ny SMM?”
Previous articleIl appartient à Clément Jaona de redorer le blason ou la toge bien souillée de ces juges considérés parmi les corps les plus corrompus de Madagasca – Expressmada du 22 février 2019
Next articleFizarana seza anatin’ny fanjakana Mahazo tombony ireo mpahay lalàna – Tia tanindrazana 22 février 2019